बदलिंदो राजनीति र परिवर्तनका मुद्दाहरु-Nagarikaawaj.com
बदलिंदो राजनीति र परिवर्तनका मुद्दाहरु
प्रसङ्ग अझै पनि चुनावकै जारी छ । यसपालीको दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा एकीकृत माओवादीलगायत परिवर्तनको कित्तामा उभिएका दलहरुले नराम्रो पराजय बेहोरेका छन् । त्यसो त चुनावी परिणामले जित्नेलाई टुप्पैमा पु¥याउने र पराजितलाई धूलो नै चटाइदिने गर्दछ । चुनाव अघिसम्म कायम रहेको हैसियत एकाएक भुईंमा पुग्छ भने कसैको एकाएक सगरमाथाको उचाइझैं उचालिन्छ । जसको हैसियत उचालिन्छ ऊ मैमत्त हुनु स्वभाविकै हो । अनि जसको हैसियत गिर्दछ, ऊ निराश र हताश हुनु पनि अस्वभाविक होइन । अहिले एकीकृत माओवादी र अन्य केही मधेशवादी तथा पछिल्लो राजनीतिक कालखण्डमा पहिचान र अधिकारका मुद्दाहरु उठाएर निर्माण भएका क्षेत्रीय दलहरुले अपेक्षित परिणाम हात पार्न सकेनन् । त्यस मध्य पनि सबैभन्दा ठूलो धक्का एकीकृत माओवादीले खानु परेको छ । उसको लागि अहिलेको परिणाम अनपेक्षित मात्र होइन किन्तु अग्रगमन र परिवर्तनको सवालमा नया“ सन्देह थपिदिएको विश्लेषण गरेको छ ।
त्यसो त चुनावमा धा“धली भयो भन्ने कुरा पनि जोडतोडका साथ उठेका छन् । अझ एकीकृत माओवादी, मधेशवादी दलहरु र पहिचानका पक्षधर नया“ क्षेत्रीय दलहरुले यसपालीको चुनावमा संस्थागत धा“धली भएको र यो एउटा ठूलो ‘डिजाइन’ अन्तर्गत सञ्चालित भएको आरोप लगाएका छन् । चुनावपछि देखिएका केही दृष्यहरु र निर्वाचन आयोगका केही द्रुत निर्णयहरुलाई हेर्दा उनीहरुको आरोपलाई सजिलै खारेज गर्न सकिने अवस्था छैन । यद्यपि यो कुराको बारेमा धेरै भन्नु जरुरी छैन किनकि यदि संस्थागत रुपमा राज्य संयन्त्रकै प्रयोग भएर धाँधली गरिएको हो भने त्यसको सत्यतथ्य त्यत्ति सजिलै बाहिर आउने छैन नै । त्यसका लागि एउटा कालखण्ड पार गर्नुपर्ने हुन्छ । तथापि चुनावी परिणामबाट सत्तासिन हुने तरखरमा रहेका दलहरुको भनाइमा धा“धलीका कुरा फगत ‘पराजयका पीडा’ मात्रै हुन् । यसोभन्दै गर्दा उनीहरुले चुनावी ‘हुँकार’ प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
अहिलेको चुनावी नतिजालाई लिएर धेरैले धेरै अर्थ लगाए र अझै पनि चुनावी विश्लेषण आउने क्रम रोकिएको छैन । समाजमा एउटा यस्तो वर्ग छ, जुन वर्ग समाजको सम्पूर्ण रुपले परिवर्तन भएको चाह“दैन । बाहिरी आवरणमा उनीहरु परिर्तनका कुरा त गर्दछन् तर, आम रुपमा तल्लो तहसम्म अधिकार प्रत्योजन गर्ने र मुलुकको राज्य संयन्त्रमा तल्लो तहका जनताको प्रतिनिधित्व स्वीकार गर्दैन । जुन बेला एकीकृत माओवादी र त्यसको नेतृत्व मुलुकभर चुनावी वातावरण निर्माण गर्न अहोरात्र खटिरहेको थियो, त्यसबेला त्यो वर्गले माओवादीलाई चुनाव विरोधी चित्रण गरिरहेको थियो । तत्कालीन नेकपा माओवादी अघिल्लो संविधानसभाको निर्वाचनबाट मुलुककै ठूलो दल बन्नु त्यो वर्गको हितमा थिएन । उनीहरु जसरी भएपनि माओवादीलाई उसको ‘साइज’मा ल्याउन यत्नरत देखिन्थे । थाहा छैन उनीहरुले माओवादीको ‘साइज’ कसरी निर्धारण गरे । शायद शान्ति प्रक्रियाका पछिल्ला ६ वर्षमा भएका विभिन्न खाले सहमति र असहमतिका राजनीतिक कीर्तिमानहरुलाई मसिनो गरी केलाउने हो भने पनि त्यसको अन्तर्यमा माओवादी प्रमुख दलको हैसियतमा उदाउनु नै मुख्य दोष थियो ।
अघिल्लो संविधानसभाको परिणाम अहिलेको जस्तो आइदिएको भए, मुलुकमा उहिल्यै संविधान पनि निर्माण हुन्थ्यो । किनकि माओवादीको पक्षमा विगतमा आएको मतले जनता तीव्र परिवर्तन चाहन्छन् भन्ने दर्शाउ“थ्यो र माओवादीको साथ र समर्थनबिना कुनै पनि ढंगबाट मुलुकको राजनीतिक कोर्स अघि बढ्ने थिएन । अनि अन्य पुराना र यथास्थितिलाई नै टालटुल गरेर राजनीतिक कोर्स अघि बढाउन चाहने पुराना संसद्वादी राजनीतिक शक्तिहरुले माओवादीले भनेजस्तो परिवर्तन र समृद्धिका मुद्दाहरुलाई भटाभट निर्णय गरेर सल्ट्याइदि“दा त्यसको सम्पूर्ण श्रेय माओवादीलाई जान्थ्यो र उनीहरुको राजनीतिक धरातल कमजोर हुन पुग्थ्यो । अल्पमत र बहुमतको सिंगौरी खेल्दै मुलुकलाई चरम् संसदीय भासमा डुबाएर खप्पिस भएका राजनीतिक दलहरुले माओवादीलाई सजिलो पु¥याउने थिएनन् र गरेनन् पनि । अनि माओवादीले उठाएका मुद्दाहरु स्थापित गराउने कार्यमा उनीहरुको साथ र समर्थन खोज्नु मरुभूमिमा पानीको स्रोत खोज्नुजस्तै कठिन काम थियो र भयो पनि त्यस्तै । र, योजनाबद्ध रुपमा उनीहरुले गएको ६ वर्षे राजनीतिक कालखण्डलाई ठोस उपलब्धीबिहिन ढंगबाट बिताइदिए । जसमा माओवादीलाई मुख्य ‘खलनायक’ बनाइयो ।
उता सम्पूर्ण मुलुक आफ्नै एजेण्डामा चलेको र अहिले राजनीतिक मूलधारमा उदाएका गणतन्त्र, संघीयता, पहिचान, अधिकार, समानुपातिक र समावेशिताजस्ता ज्वलन्त एजेण्डाहरुको जननीकर्ता भइखाएको र मुलुकको अग्रगामी शक्तिको रुपमा परिचित माओवादी भने शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ‘कच्चा खेलाडी’ साबित हुन पुग्यो । उनीहरुलाई अलिकति त पहिलो संविधानसभामा प्राप्त भएको ‘एतिहासिक सफलता’को भारीले नै किच्यो । अनि अलिकति ६ वर्षे शान्तिपूर्ण राजनीतिक कालखण्डमा ‘वर्ग उत्थान’ गर्ने अभियानमा लाग्दै बित्यो । अनि जनतास“ग विगतमा गरेका बाचाकबुल र उनीहरुप्रतिका प्रतिबद्धताहरु फगत ‘चुनावी नारा’ मै सीमित हुन पुगे । एक हिसाबले भन्ने हो भने माओवादीले आफूलाई फौजी राजनीतिबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा त अवतरण गरे तर, शान्तिपूर्ण राजनीतिमा जनतास“ग एकाकार हुने कुरा भुले । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा सहर परिवर्तन गर्न गाउ“बाट सहर छिरेकाहरुलाई सहर र सहरको रमिताले नै परिवर्तन गरिदियो ।
सामान्य रुपमा हेर्ने हो भने आम नागरिक जहिल्यै पनि परिवर्तनको पक्षधर हुन्छन् । उनीहरुले जहिल्यै पनि परिवर्तनका पक्षधर शक्तिहरुलाई मत अभिव्यक्त गर्नुपर्ने हो । तर, यसपटकको निर्वाचनमा किन त्यसको विपरित मतदान भयो ? अथवा किन हक, अधिकार, पहिचान र परिवर्तनका कुरा गर्ने दलहरु सा“घुरिन पुगे ? के उनीहरुले उठाएको मुद्दा जनतालाई मन नपरेर त्यस्तो नतिजा आएको हो ? अथवा उनीहरुले जनतालाई आम रुपमा ती मुद्दा बुझाउन सकेनन् ? अहिले यी र यस्ता थुप्रै सवालहरु छन्, जुन अनुत्तरित छन् । फेरि ती मुद्दाहरुलाई हेर्ने र विश्लेषण गर्ने फरकफरक दृष्टिकोणहरु पनि छन् । जे होस्, हालको चुनावी नतिजाले परिवर्तन र समृद्धिका मुद्दाहरुले हारेका होइनन् । बरु अघिल्लो संविधानसभाको निर्वाचनबाट ठूला शक्ति बनेका नया“ राजनीतिक शक्तिहरुप्रति जनताको आकाशिएको अपेक्षा विगत संविधानसभा निर्वाचनयताको ६ वर्षे राजनीतिक कालखण्डमा अंकुरित हुन नसक्दा र त्यो अवधिमा पनि उही पुरानै ढर्राबाट राजनीति अघि बढ्दा जनतामा जागेको उत्साह र उमंग केही मात्रामा खस्किएको हो ।
त्यसो त आम मानिसको चाहना हरेक कुरामा तुरुन्तै तृप्तीको अवस्थामा पुग्ने नै हुन्छ । अघिल्लो संविधानसभाताक मुलुकमा यस्तो माहोल निर्माण भएको थियो कि मुलुक सा“च्चिकै नया“ युगमा प्रवेश गर्नेछ भन्ने कुरामा धेरैले विश्वास गरेका थिए । हरेक क्षेत्रमा परिवर्तनका कुरा हुन्थे । नया“ नेपाल निर्माणका बहस हुन्थे । सबैका चाहना र अभिलाषाहरु उत्कट भएका थिए । एकहिसाबले भन्ने हो भने एकातर्फ २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनले भित्र्याएको संसदीय राजनीतिको नग्न दृष्य, त्यहि दृष्यबाट जन्मिएको माओवादी जनयुद्ध र त्यो युद्धले जन्माएका विभिन्न खाले हक, अधिकारका मुद्दाहरु एकैपटक स्थापित हुने र समग्र नेपालको पुननिर्माण हुने आशमा बसेका आम नागरिक फेरि उही ढंगको पुरानो राजनीतिक खेलको पुनरावृत्ति हु“दा बेचैनी र निराश हुन पुगे । र, समाजमा आखिर ‘जुनै जोगी आएपनि कानै चिरेका’ भन्ने लोकोक्ति चरितार्थ हुन पुग्यो ।
यद्यपि यो अनपेक्षित चुनावी परिणामसम्मको निराशा त शायद थिएन भन्ने विश्वासमा थियो माओवादी नेतृत्व पनि र कम्तीमा यसपटक ती राजनीतिका मूलधारमा संक्रमित मुद्दाहरुलाई स्थापित गर्नका लागि परिवर्तनका पक्षधर शक्तिहरुलाई यसपटक बहुमत जरुरी थियो । सैद्धान्तिक रुपले भन्ने हो भने माओवादी र परिवर्तनका पक्षधरहरुले माग गरेको कुरा सहि नै थियो । यदि यसपटक उनीहरुले भनेजस्तो चुनावी नतिजा आएको हुन्थ्यो भने यी सबै गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक र सहभागितामूलक प्रतिनिधित्व, हक, अधिकार र पहिचानका मुद्दाहरु जसैगरी पनि संविधानमा अभिलेख हुन्थ्यो र मुलुकले आर्थिक समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्न सक्थ्यो । तर, जनादेश परिवर्तनका मुद्दाहरुप्रति प्रतिक्रियात्मक रहेका शक्तिहरुतर्फ गयो । जो अरुको एजेण्डामा प्रतिक्रियात्मक हुनुलाई नै सर्वोपरि ठान्छ, उसको नेतृत्वमा अहिलेका युगान्तकारी परिवर्तनका मुद्दाहरु सम्बोधित हुन्छन् भनेर आशा र विश्वास गर्ने ठाउ“ छैन । त्यसो भए परिणति के हुन्छ त ? निश्चय पनि अग्रगमन र परिवर्तनका पक्षधर शक्तिहरुले नया“ शिराबाट राजनीतिक संघर्षतिर हेलिनु पर्ने परिस्थिति सृजना हु“दै गएको छ ।
त्यसो त समाज विकासको सिद्धान्तले पनि त्यसैको माग गर्दछ । पराजयको पीडामा रहेका एकीकृत माओवादी र मधेशवादी तथा पहिचानवादी केही क्षेत्रीय दलहरुले अहिल्यै निराश हुनुपर्ने छैन । किनकि यसपालीको चुनावमा पनि विगतको जस्तै परिणाम आएको हुन्थ्यो भने अर्को ५ वर्षमा पनि उही पुरानो राजनीति दोहोरिने संभावना बढ्ने थियो । त्यसले झन् परिवर्तनका पक्षधरहरुप्रति जनताको भरोसा टुट्ने थियो । तर, यसपाली जसले मुलुकको राजनीतिकको कमाण्ड सम्हालेका छन् उनीहरुप्रति जनताको विश्वास र भरोसा छैन । आखिर चुनावमा हातले मतदान गर्ने त ९० लाख मतदाता मात्रै न हुन् परिआए खुट्टाले मतदान गर्नका लागि तम्तयार भएर बसेका २ करोड नागरिकहरु बाहिरै छन् भन्ने कुरा बिर्सनु हु“दैन । तर, त्यसको लागि जनताका मुद्दाहरुलाई सहि र तात्विक ढंगबाट उठान गर्नु जरुरी हुन्छ । जनतालाई कहिल्यै पनि धोका नदिने शर्तमा र उनीहरुस“ग सधैं एकाकार भइरहने शर्तमा यदि जनताका हक, अधिकार, पहिचान र समृद्धिका मुद्दाहरुलाई उठाउने हो भने त्यसलाई स्थापित गर्न जनताले नै संघर्ष गर्नेछन् ।
यसर्थ, हक, अधिकार, पहिचान र समृद्धिका सपना देख्ने र त्यसलाई साकार बनाउन अहोरात्र खट्नेहरु निराश हुनु पर्दैन । अहिलेको चुनावी परिणामले परिवर्तनका पक्षधर शक्तिहरु राजनीतिक रुपमा खुम्चिन पुगे पनि ती मुद्दाहरुको आयतन यति फराकिलो छ कि तिनीहरु नेपाली राजनीतिक परिदृष्यबाट त्यति सजिलै विलुप्त हुनेछैनन् । त्यसको लागि खा“चो छ त फेरि पनि दृढ इच्छाशक्तिका साथ जनताका मुद्दाहरुलाई उठाउने नेतृत्वको । जनताका पक्षमा लड्नेहरुले फेरि पनि एकपटक त्यसको नेतृत्व लिन तयार हुनुपर्छ ।